MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardMPT Telecommunication, Author at MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Author: MPT Telecommunication
MPT မှ လုပ်ငန်းအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ထပ်မံစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု များ အတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်)
ပြည်တွင်းရှိ တာဝန်သိလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် MPT သည်ယနေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ စာတိုက်ကြီးရုံး (ဖုန်းဘေလ်ဌာန) ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် ဝန်ထမ်းတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (ကိုဗစ်–၁၉) ရောဂါ စစ်ဆေး တွေ့ရှိမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်များကို နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါ ဝန်ထမ်းသည် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့အထိ ရုံးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။​
ထို့အပြင် မိမိတို့အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့်စဥ်ဆက်မပြတ် ဆက်သွယ်ကာ ထိတွေ့မှု ရှိသူများကို ခြေရာခံခြင်းနှင့် အဆိုပါ ရောဂါကူးစက်မှု တွေရှိရခြင်းနှင့်အတူ ဆက်စပ်နိုင်သည့် မိမိတို့၏သုံးစွဲသူများနှင့်ဝန်ထမ်းများအား ထောက်ပံ့ ကူညီဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဝန်ထမ်းကို ရောဂါကုသရေးဌာနသို့လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး အပြည့်အဝ ပြန်လည် ကောင်းမွန်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကုသမှုများကို ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါအချိန်မတိုင်မီကပင် MPT Own Shop ဆိုင်များတွင် တိကျခိုင်မာသော ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ချက်များ ကို မိမိတို့၏ သုံးစွဲသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံစိတ်ချမှုတို့အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကောင်အထည်ဖော် ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။
မိမိတို့အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောရောဂါ ကာကွယ်နိုင်ရေး အလေ့အကျင့်ကောင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဆိုင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဥ်အတွင်းပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း၊ မျက်နှာအကာ အကွယ်တို့ကို ဝတ်ဆင်စေခြင်း
သုံးစွဲသူနှင့်ဝန်ထမ်းတို့အကြား အကာအကွယ်အလွှာများထားရှိခြင်း (မှန်အကာများ)၊ မိမိတို့၏ ရုံးခန်းများ၊ ဆိုင်များနှင့်၊ ဖယ်ရီများ တွင် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပိုးသတ်ခြင်း
မိမိတို့အနေဖြင့် ကိုဗစ်–၁၉ နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ကာ MoHS ၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို အတိအကျလိုက်နာပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်နှံ့မှုကို လျော့ကျသွားစေရန်နှင့် နောက်ထပ် ရောဂါကူးစက်မှုများရှိလာပါကလည်း လိုအပ်သည့် ဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်လည်း MoHS ၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပြီး ကိုဗစ်–၁၉ ရောဂါပြန့်နှံ့မှုကို လျှော့ချနိုင်ရန် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကိုလည်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။
သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက်ကာလတွင် MPT Own Shop ဆိုင်အများစုကိုခေတ္တပိတ်ထားချိန်တွင် MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ကို သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် နေအိမ်၌ပင် MPT4U App အသုံးပြုခြင်း၊ MPT Call Center 106 နှင့် MPT Facebook messenger တို့မှတစ်ဆင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
MPTအနေဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း လုံးတွင်ဆက်လက်လည်ပတ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး “မြန်မာပြည်နှင့်အတူရှိနေမည်” ဆိုသည့် ကတိကဝတ်အတိုင်း အခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့်ကာလများအတွင်း ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on အောက်တိုဘာ 31, 2020 ဒီဇင်ဘာ 11, 2020 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
(၇ နှစ်မြောက် အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူများသည် ဖုန်းဘေလ်များကို ထောဘီ ၇ဆ ဖုန်းဘေလ်များအဖြစ် အကြိမ်အကန့်အသတ်မရှိ လဲလှယ်ရယူနိုင်ပြီး အလွန်သက်သာသောနှုန်းထားများ နှင့် အရှည်ဆုံးသက်တမ်းထိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။)
(ရန်ကုန်၊ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သော MPT သည် MPT Prepaid သုံးစွဲသူများအတွက် ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ်ကို အဆပေါင်း ၇ ဆ ပွားကာ ရက်ပေါင်း (၆၀) အထိ စိတ်တိုင်းကျအသုံးပြုနိုင်မည့် “ထောဘီ ၇ဆ” အထူးပရိုမိုးရှင်း စီအစဉ်သစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။
“ထောဘီ ၇ဆ”အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်သည် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) နှင့် ဂျပန် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း KDDI Summit Global Myanmar (KSGM) တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် နိုင်ငံ တစ်ဝန်းရှိ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုအသိုက်အဝန်းများအတွက် အကောင်း ဆုံးသော ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်လျက်ရှိသည်မှာ (၇)နှစ်မြောက်သို့ ရောက်ရှိခြင်း မှတ်တိုင် သစ်တစ်ခုကို စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အစဉ်တစိုက် အားပေးကြသော သုံးစွဲသူများအတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ MPT Prepaid (ဆွေသဟာ၊ ရှယ်ပြော နှင့် ရွှေစကား) သုံးစွဲသူများသည် ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ်ကို အဆပေါင်း ၇ ဆ ပွားကာ စိတ်တိုင်းကျ လဲလှယ်ရယူနိုင်မည့် “ထောဘီ ၇ဆ” အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်သစ်ကို ရရှိခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် “ထောဘီ ၇ဆ” ဖုန်းဘေလ်ကို MPT ၏ ပိုမိုမြန်ဆန်သော အရည်အသွေးမြင့် 3G/ LTE+ ကွန်ရက် ပေါ်ကတစ်ဆင့် MPT အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ SMS စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း (Pay As You Go) တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
“ထောဘီ ၇ဆ” အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ် မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ MPT-KSGM JO ၏ စီးပွားရေးဌာနကြီးမှ ဒုတိယအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးကိုကိုအောင်က “ကျွန်တော်တို့ MPT ကို အစဉ်တစိုက် သုံးစွဲနေသူတွေအတွက် ဖုန်းဘေလ်များကို အကြိမ်အကန့်အသတ်မရှိ လဲလှယ်ရယူနိုင်ပြီး ပိုမိုသက်သာတဲ့ နှုန်းထားတွေနဲ့ ရက်ရှည်ရှည်နဲ့ စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်မယ့် “ထောဘီ ၇ဆ” အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်ပေးခွင့်ရလို့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အလွန်ပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ MPT နဲ့ KSGM တို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာ (၇)နှစ်မြောက်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု အထိမ်းအမှတ်ကို စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တာဟာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေက အဓိကပြယုဂ် တစ်ခုဖြစ်တာ ကြောင့် MPT ကို အစဉ်တစိုက်သုံးစွဲခဲ့တဲ့ သုံးစွဲသူတွေအားလုံးကို ဖုန်းဘေလ်တွေ ဖြည့်သွင်းတဲ့အခါ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု၊ အသက်သာဆုံး နှုန်းထားများနဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး “ထောဘီ ၇ဆ” အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် အိမ်မှာပဲ နေနေရတဲ့ကာလတွေမှာ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ MPT က အကျိုးခံစားခွင့်တွေကို လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် သွားဖို့လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“ထောဘီ ၇ ဆ” ဖုန်းဘေလ်ကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် လဲလှယ်ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုနိုင်သည့် နှုန်းထား (ကုန်သွယ်ခွန်ပါဝင်ပြီး)
ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ် ၁,၁၁၁ ကျပ် = ထောဘီ ၇ဆ ဖုန်းဘေလ် ၇,၇၇၇ ကျပ် ၁၅ ရက် သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက် = ၇.၄ကျပ်/MB
MPT-MPT ဖုန်းခေါ်ဆိုခ = တစ်မိနစ်လျှင် ၃၆.၈ကျပ်
MPT-MPT SMS = တစ်စောင်လျှင် ၂၀ကျပ် Send 1111 to 1332 *7001#
ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ် ၂,၂၂၂ ကျပ် = ထောဘီ ၇ဆ ဖုန်းဘေလ် ၁၅,၅၅၄ ကျပ် ၃၀ ရက် Send 2222 to 1332 *7002# *224#
ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ် ၅,၅၅၅ ကျပ် = ထောဘီ ၇ဆ ဖုန်းဘေလ် ၃၈,၈၈၅ ကျပ် ၆၀ ရက် Send 55555 to 1332 *7005#
ထို့ပြင် သောကြာနေ့တွင် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများသည် “ထောဘီ ၇ ဆ” ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်အား Happy Friday အပိုဆုလက်ဆောင်နှင့်အတူ အကျိုး ကျေးဇူးများ ပိုမိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထပ်မံ၍ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ထောဘီပက်ကေ့ချ်ကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို ဝယ်ယူပါက ထိတိုင်းထော (ထောဘီထိပေါက်) ဂိမ်းထဲ၌ ကံစမ်းရန် အခွင့်အရေး(၁)ကြိမ် ရရှိပြီး ထောဘီဖုန်းဘေလ် အဆပေါင်း ၁၀၀ ထိ ကံထူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သုံးစွဲသူများသည် “ထောဘီ ၇ဆ” ပက်ကေ့ချ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ပြောင်းလဲရယူထားသော ထောဘီ ၇ဆ ဖုန်းဘေလ်များသည် ဒေတာပက်ကေ့ချ်များ၊ ထပ်ဆောင်း ဝန်ဆောင်မှု များနှင့် အခြား voice ပက်ကေ့်ချ်များ ဝယ်ယူခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိပေ။ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်တွင် စတင်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတစ်ခုဖြစ်သော MPT သည် သုံးစွဲသူများအား ထောက်ပံ့နိုင်ရန်နှင့် ပြည့်စုံကြွယ်ဝသော ဒီဂျစ်တယ်လူမှုဘဝ အတွေ့အကြုံများကို ရရှိခံစားစေရန် နည်းလမ်းကောင်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် စူးစမ်းရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ MPT သည် အထူးသဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ သက်ရောက်မှုခံနေရသည့် အချိန်တွင် သုံးစွဲသူများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးကောင်းများ ရရှိနိုင်ရန် နှင့် ရင်ခုန်စိတ် လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်လက်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
MPT သုံးစွဲသူများအတွက် ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက Hotline ဖုန်းနံပါတ် 106 သို့ ခေါ်ဆို၍ သော်လည်းကောင်း၊ MPT ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော www.mpt.com.mm သို့မဟုတ် MPT ၏ တရားဝင် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ် စာမျက်နှာဖြစ်သော www.facebook.com/mptofficialpage တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 17, 2020 စက်တင်ဘာ 28, 2020 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
(ရန်ကုန်၊ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သော MPT သည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တစ်မူထူးခြားဆန်းသစ်သည့် “ရွှေအိပ်မက်” အစီအစဉ်ကို သုံးစွဲသူများ၏ အိပ်မက်များအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေရန် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
MPT နှင့် KSGM တို့ Joint Operations အဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ပြည်သူလူထု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူမူအသိုင်းအဝိုင်းများအား အကောင်းဆုံး ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်လာသည်မှာ မကြာသေးမီက (၇)နှစ်မြောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု မှတ်တိုင်တစ်ခု အဖြစ်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ (၇) နှစ်မြောက်သို့ ရောက်ရှိခြင်း အောင်မြင်မှု အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် MPT သည် ကံထူးရှင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံရမည့် သုံးစွဲသူ (၇) ဦး ၏ အိပ်မက်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် “အနာဂါတ်တွေ ပုံဖော်ဖို့ ရွှေအိပ်မက်နဲ့ ရှယ်လန်းစို့”အစီအစဉ်ကို ကျင်းပဆောင်ရွက်လိုက်သည်။ ကံထူးဆုရရှိသူများသည် ၎င်းတို့၏ အိမ်မက်များကို အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အများဆုံး ငွေကျပ် သိန်း (၅၀၀) စီ အထိ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်တွင် စိတ်ပါဝင်စားသော MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် https://www.facebook.com/mptGoldendream Facebook Page မှတစ်ဆင့် “ရွှေအိပ်မက်” အစီအစဉ်သို့ဝင်ရောက်ပြီး Facebook Messenger ကိုအသုံးပြုကာ ၎င်းတို့၏ အိပ်မက်များကို တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
“ရွှေအိပ်မက် အစီအစဉ်နဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို သူတို့ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ အိပ်မက်တွေကို ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ဖို့အတွက် အားပေးအားမြှောက်ပြုချင်ပါတယ်။ MPT မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျှော်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေက ကန့်သတ်ထားတဲ့ဘောင်တွေကနေ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို တွန်းအားဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ ခိုင်မာတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ် ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့က ဒီအစီအစဥ်ကနေတစ်ဆင့် ကူညီ ထောက်ပံ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု MPT-KSGM JO ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Tetsunori Nagashima က ပြောကြားခဲ့သည်။
MPT မှ သုံးစွဲသူများအားလုံးကို ၎င်းတို့၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနှင့် ဇွဲလုံ့လရှိမှုကို ပြသရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြပေးထားသော အမျိုးအစားများဖြင့် ပါဝင်နိုင်ရန် တိုက်တွန်း လိုက်ပါသည်။
၁။ လုပ်ငန်းအသစ်အတွက်ထောက်ပံ့ခြင်း (မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်)
၂။ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း
အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိသူများအားလုံးကို MPT မှ ကံစမ်းမဲနိုက်ကာရွေးချယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကံထူးရှင် (၇) ဦးအား ရွေးချယ်ကာ ဆုချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မှန်ကန်တိကျသော ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များနှင့် MPT ဆင်းမ်ကတ်ကို မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ပါဝင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို https://www.facebook.com/mptGoldendream တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
MPT သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏အိပ်မက်များကို အောက်တိုဘာ (၇) ရက်နေ့အထိ တင်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို ၃ ပတ်ကြာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး အိပ်မက်များကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ “ရွှေအိပ်မက်”အစီအစဉ်ကို အခမဲ့ပါဝင်နိုင်ပြီး အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပေ။ ကံထူးဆုရရှိသူများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ အတွင်းတွင် ကြေညာပေးသွား မည် ဖြစ်သည်။
လူသားတို့၏ သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက်ကိုဆန်းစစ်ရပါက ကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံးသော တီထွင်မှုများမှာ စိန်ခေါ်မှုများရှိနေသည့် ကာလများတွင် ဖန်တီးခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုလို MPT ၏ ထူးခြားသည့် အစီအစဉ်မှာလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါကို ရင်ဆိုင်တွန်းလှန် နေရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ပျော်ရွှင်မှုနှင့် မျှော်လင့်ချက်များရရှိစေကာ တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိတို့နေအိမ်တွင် နေထိုင်စဉ် တီထွင်ကြံဆမှုနှင့် အိမ်မက်များအကောင်အထည်ဖော်ရန် အားပေးနေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
“ရွှေအိပ်မက်” အစီအစဉ်အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Hotline ဖုန်းနံပါတ် 106 သို့ ခေါ်ဆို၍ သော် လည်းကောင်း၊ MPT ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော www.mpt.com.mm သို့မဟုတ် MPT ၏ တရားဝင် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ် စာမျက်နှာဖြစ်သော www.facebook.com/mptofficialpage တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 16, 2020 ဒီဇင်ဘာ 24, 2020 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 15, 2020 ဒီဇင်ဘာ 24, 2020 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
ရန်ကုန်ရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်း (၂) ဦး ၌ COVID-19ထပ်မံ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်း အသိပေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) မရမ်းကုန်းရုံး နှင့် ပုဇွန်တောင်ရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်း (၂) ဦး၌ COVID-19 ရောဂါပိုး ထပ်မံ စစ်ဆေး တွေ့ရှိရကြောင်း နှင့် ယခုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည့် ဝန်ထမ်း ၂ ဦးသည် သုံးစွဲသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်တွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း MPT က အတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရသူဝန်ထမ်းနှင့် အတူတကွ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဝန်ထမ်းများ၊ အနီးကပ်ထိတွေ့မှုရှိသူ ဝန်ထမ်းများကို အလုပ်ခွင်တွင် အချိန်မည်မျှကြာကြာအတူတကွ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ နောက်ဆုံး ထိတွေ့ခဲ့သည့် ရက်မှစ၍ ၂၁ ရက်တိတိ အသွားအလာ ကန့်သတ်မှု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အညီလိုက်နာကာ အဆိုပါဝန်ထမ်းများနှင့် အနီးကပ်ထိတွေမှုရှိသည့် ဝန်ထမ်းများ စာရင်းကို ပြုစုပြီး မရမ်းကုန်းရုံး နှင့် ပုဇွန်တောင်ရုံးများကိုလည်း ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 14, 2020 ဒီဇင်ဘာ 11, 2020 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေး နှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကြံခင်း အိတ်ချိန်း ၀၄၄-၄၀xxx ၀၄၄-၂၀၄၀xxx
(အရှေ့ပိုင်း) ရွှေကျင် အိတ်ချိန်း ၀၅၂-၄၂xxx ၀၅၂-၂၇၄၂xxx
ဆွာ အိတ်ချိန်း ၀၅၄-၇၀xxx ၀၅၄-၂၈၇၀xxx
ရေတာရှည် အိတ်ချိန်း ၀၅၄-၈၀xxx ၀၅၄-၂၈၈၀xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) မင်းလှ အိတ်ချိန်း ၀၅၃-၃၀xxx ၀၅၃-၂၀၃၀xxx
ကချင်ပြည်နယ် နမ္မတီး အိတ်ချိန်း ၀၇၄-၄၂xxx ၀၇၄-၂၅၄၂xxx
ရွှေကူ အိတ်ချိန်း ၀၇၄-၅၂xxx ၀၇၄-၂၅၅၂xxx
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြစ်ငယ် အိတ်ချိန်း ၀၂-၅၅xxx ၀၂-၄၀၅၅xxx
မွန်ပြည်နယ် ပေါင် အိတ်ချိန်း ၀၅၇-၄၇xxx ၀၅၇-၂၀၄၇xxx
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြောင် အိတ်ချိန်း ၀၇၁-၄၃xxx ၀၇၁-၂၀၄၃xxx
မုံရွေး-ကြေးမုံ အိတ်ချိန်း ၀၇၁-၆၀xxx ၀၇၁-၂၀၆၀xxx
ကျောက်မြောင်း အိတ်ချိန်း ၀၇၅-၃၅xxx ၀၇၅-၂၀၃၅xxx
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) မိုင်းပြင်း အိတ်ချိန်း ၀၈၄-၇၀xxx ၀၈၄-၂၀၇၀xxx
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ပင်းတယ အိတ်ချိန်း ၀၈၁-၆၆xxx ၀၈၁-၂၃၆၆xxx
နယ်မြေ အိတ်ချိန်း Migration စတင်ပြုလုပ်မည့်
ရက်စွဲ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ် အသစ်ပြောင်းလဲ
ဒေသကြီး သန်လျင် အိတ်ချိန်း ၂၈-၀၉-၂၀၂၀ ၀၅၆-၂၁xxx ၀၅၆-၂၀၂၁xxx
၂၈-၀၉-၂၀၂၀ ၀၅၆-၂၂xxx ၀၅၆-၂၀၂၂xxx
၂၈-၀၉-၂၀၂၀ ၀၅၆-၂၃xxx ၀၅၆-၂၀၂၃xxx
ဒေသကြီး အင်ပင် အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၄၄-၃၈xxx ၀၄၄-၄၇၃၈xxx
ကွင်းကောက် အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၄၄-၆၅xxx ၀၄၄-၄၇၆၅xxx
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့ပိုင်း) ကျောက်ကြီး အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၅၄-၄၉xxx ၀၅၄-၄၇၄၉xxx
ကျွဲပွဲ အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၅၄-၄၈xxx ၀၅၄-၄၇၄၈xxx
ပျဉ်ပုံကြီး အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၅၂-၇၀xxx ၀၅၂-၄၇၇၀xxx
နေပြည်တော် အာဟာရသုခစျေး အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၆၇-၃၈xxx ၀၆၇-၄၆၃၈xxx
ဒေသကြီး အင်းဒိုင် အိတ်ချိန်း ၃၀-၀၉-၂၀၂၀ ၀၁-၆၂၅xxx ၀၁-၄၆၃၅xxx
ကချင်ပြည်နယ် ဟိုပင် အိတ်ချိန်း ၀၁-၁၀-၂၀၂၀ ၀၇၄-၆၂xxx ၀၇၄-၂၅၆၂xxx
ဒေသကြီး ကောလင်း အိတ်ချိန်း ၀၁-၁၀-၂၀၂၀ ၀၇၅-၄၂xxx ၀၇၅-၂၀၄၂xxx
၀၁-၁၀-၂၀၂၀ ၀၇၅-၄၃xxx ၀၇၅-၂၀၄၃xxx
ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း MPT Club အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဒီဂျစ်တယ်ဘဝများကို ပိုမိုပြည့်စုံ ကြွယ်ဝစေမည့် အထူးအခွင့်အရေးများ ပေးအပ်သွားမည်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်) – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် ဦးဆောင် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ ဖြစ်သည့် MPT သည် သုံးစွဲသူများကို ပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် ၎င်း၏ ဒီဂျစ်တယ်ဘဝများ ပိုမိုပြည့်စုံ ကြွယ်ဝစေရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ လတ်တလောတွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ တားဆီးကွယ် တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နေအိမ်၌ နေထိုင်နေကြသည့် MPT သုံးစွဲသူများ၏ အကျိုးကျေးဇူးအတွက် MPT Club နှင့် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အထူးခံစားခွင့်များနှင့် ပရိုမိုးရှင်း များကို ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။
ယနေ့တွင် Diamond နှင့် Platinum အဆင့် MPT Club အဖွဲ့ဝင်များသည် ဒီဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေး၊ ဒီဂျစ်တယ် ကျန်းမာရေး၊ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အားကစား လုပ်ဆောင်မှု၊ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အစားအသောက်ပို့ဆောင်မှု နှင့် အွန်လိုင်း စျေးဝယ်မှု စသည့် အရေးပါသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် MPT Club ၏ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်း ၆ ခုဖြစ်သည့် Foodpanda ၊ T-Fitness ၊ COOKIE TV ၊ JOOX ၊ rgo47 နှင့် MyanCare တို့၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အထူးပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်များနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိခံစားနိုင်မည့် MPT Club ၏ ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
MPT Club အဖွဲ့ဝင်များ ရရှိနိုင်မည့် ခံစားခွင့်များမှာ အောက်ပါဇယားအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
အကျိုးခံစားခွင့်- MPT Club Diamond – ၈,၀၀၀ ကျပ် လျှော့စျေး
MPT Club Platinum – ၅,၀၀၀ ကျပ် လျှော့စျေး
စည်းကမ်းချက်များ- MPT Club Point များကို လဲလှယ်နိုင်ပြီး MPT Money အကောင့်ဖွင့်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
အကျိုးခံစားခွင့်- အထွေထွေ ရောဂါကုဆရာဝန်များ နှင့် အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများဖြင့် ၁ ကြိမ် အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်မည်။
စည်းကမ်းချက်များ- MPT Club Point များကို လဲလှယ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး MPT Money အကောင့်ဖွင့်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
အကျိုးခံစားခွင့်- T Fitness Application တွင် Premium ၃ လ ခံစားခွင့်
အကျိုးခံစားခွင့်- JOOX Application တွင် Premium ၁ လ အခမဲ့ ခံစားခွင့်
အကျိုးခံစားခွင့်- MPT Club Diamond – ၂၀,၀၀၀ ကျပ် လျှော့စျေးဘောက်ချာ
MPT Club Platinum – ၁၀,၀၀၀ ကျပ် လျှော့စျေးဘောက်ချာ
စည်းကမ်းချက်များ-Rgo47 Application တွင် Promo Code ကို အသုံးပြုရပါမည်။
အကျိုးခံစားခွင့်- Cookie Movie Plan – ၁ လ အခမဲ့
ရှုပ်ရှင်ကားသစ် – ၁ ကား အခမဲ့
စည်းကမ်းချက်များ- Cookie Application တွင် Promo Code ကို အသုံးပြုရပါမည်။
“နေ့ရက်တိုင်းမှာ စိုပြေမှာ MPT Club ရဲ့စေတနာ” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ MPT Club သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း သုံးစွဲသူများ၏ ဒီဂျစ်တယ်ဘဝများ ပိုမိုပြည့်စုံ ကြွယ်ဝစေရေးအတွက် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည့် အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် အထူးအစီအစဉ် များကို ပြုလုပ်ပေးလျက် ရှိသည်။
MPT-KSGM JO ၏ စီးပွားရေး အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Tetsunori Nagashima က “ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းက ပြည်သူအများနဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းအားလုံး ခံစားနေကြရပြီး နေ့စဉ် လူနေမှုဘဝတွေကိုလည်း များစွာ ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ MPT သုံးစွဲသူ အများစုဟာ မိမိတို့ရဲ့ နေအိမ်တွေမှာပဲ နေထိုင်နေကြတာကြောင့် MPT အနေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ စိတ်သောကတွေ ကင်းဝေးစေရေးတို့ကို ရည်ရွယ်ပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ယခုလိုမျိုး မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး သုံးစွဲသူတွေ လိုအပ်တဲ့၊ အရေးပါတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အထူးခံစားခွင့်တွေနဲ့အတူ အိမ်တိုင်ရာရောက် ရရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက် ပြုလုပ်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြောကြား သွားခဲ့သည်။
MPT Club ဆိုသည်မှာ MPT သုံးစွဲသူများကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်အကျိုးခံစားခွင့်များစွာကို ပြန်လည်ရရှိ ခံစားနိုင်မည့် အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ MPT Club ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်စွာ မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီး သန်းပေါင်းများစွာသော MPT သုံးစွဲသူများအတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အကောင်းဆုံး ပေးအပ်လျက် ရှိသည်။ MPT Club အဖွဲ့ဝင်များအတွက် နာမည်ကျော် အမှတ်တံဆိပ်များမှ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲရာတွင် ပိုမိုပြည့်စုံကြွယ်ဝသည့် အတွေ့အကြုံများကို ရရှိခံစားနိုင်ရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ် ချွေတာနိုင်မည့် အထူးအစီအစဥ်များကို စဥ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် MPT Club အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ မိတ်ဖက်ဆိုင်ပေါင်း (၇၀) ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး သုံးစွဲသူများအတွက် MPT Club Point များနှင့် အထူးလျှော့‌စျေးများနှင့်အတူ အကောင်းဆုံးသော အတွေ့အကြုံများကို ပေးအပ်နိုင်မည့် အထူးအစီအစဥ်များ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။
MPT Club အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ပြီး ပွိုင့်များကို စုဆောင်းနိုင်ရန် 345 သို့ REG M သို့ F (ဥပမာ- REG F) ဟု စာတို (SMS) ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။ MPT Club အဖွဲ့ဝင်ပြိးနောက် MPT Club Point ၅၀ ကို ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး ပွိုင့်များကို MPT Club ၏ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများမှ ထုတ်ကုတ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့် MPT မှ ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
MPT Club မှ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် အစီအစဥ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါက Hotline ဖုန်းနံပါတ် 106 သို့ ခေါ်ဆို၍ သော်လည်းကောင်း၊ MPT ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော www.mpt.com.mm သို့မဟုတ် MPT ၏ တရားဝင် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာ ဖြစ်သော www.facebook.com/mptofficialpage တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင် ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 11, 2020 ဒီဇင်ဘာ 11, 2020 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 10, 2020 ဒီဇင်ဘာ 11, 2020 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Shal Kyi Data Pack တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူတိုင်း Shwe Stream Application နှင့် Byoh Application အထူးသုံးစွဲခွင့်ပါ ရရှိမည့်Data Pack ကို MPT မှာ ရရှိနိုင်ပါပြီ။
မြန်မာရုပ်ရှင်ကားကြီးများ၊ မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းများ၊ မြန်မာစာတန်းထိုး ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့် အိန္ဒိယဇာတ်ကားကောင်းများအပြင် ဗေဒင်၊ ဝိတ်ချနည်းများ၊ အနုပညာသတင်းအစုံအလင်၊ ခရီးသွား၊ အစားအစာ စသည့် အစီအစဥ်ကောင်းများ ကို Shwe Stream Application နဲ့ Byoh Lifestyle Application များပေါ်တွင် အကန့်အသတ်မရှိကြည့် ရှု နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Entertainment Pack ကို နှစ်မျိုးရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၇ရက်စာ Weekly Data Pack
၃၀ရက် စာ Monthly Data Pack
တန်ဖို: ၅၄၉ ကျပ် ၉၈၉ ကျပ်
ရရှိနိုင်မည့် Data ပမာဏ 225 MB 335 MB
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက် ၇ရက် ၃၀ရက်
ခေါ်ဆိုဝယ်ယူရန် *8208*7# *8208*30#
အထူးအစီအစဉ်် Shwe Stream and Byoh Services access
Shal Kyi Data Pack တွင် ပါဝင်သောအစီအစဉ်များ
Shwestream Application မှ နာမည်ကြီး မြန်မာရုပ်ရှင်များနှင့် နိင်ငံတကာရုပ်ရှင်များစွာ၊
Byoh Lifestyle Application မှာ ဗဟုသုတရဖွယ်ရာ ကဏ္ဍပေါင်းများစွာ ကြည့်ရှု ခွင့်။
MPT Shal Kyi Data Pack ကို Shwe Stream and Byoh Application access နဲ့ အတူ ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ။
အဆင့် (၁)– ၇ရက် စာ Weekly Data Pack ဝယ်ယူရန် *8208*7# (သို့မဟုတ်) ၃၀ရက် စာ Monthly Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် *8208*30#ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၂)– ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးပါက Regular data ကို ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး Shwe Stream and Byoh Lifestyle Application အထူး သုံးစွဲခွင့်အတွက် link ကို စာတိုဖြင့် လက်ခံရရှိပါမည်။
အဆင့် (၃) – လက်ခံရရှိထားသော စာတိုထဲရှိ Link မှတစ်ဆင့် Shwe Stream (သို့မဟုတ်) Byoh Lifestyle App သို့ ဝင်ရောက်၍ Shwe Stream and Byoh Lifestyle Application အထူးသုံးစွဲခွင့်ကို ရယူကာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရုပ်ရှင်များ၊Lifestyleအကြောင်းအရာများကို ကို ပျော်ရွှင်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
MPT သုံးစွဲသူများသည် Shal Kyi Data Pack ကို တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူလျှင် ဒေတာပမာဏ 225 MB (ခုနှစ်ရက်စာ) သို့မဟုတ် 335MB (ရက် ၃၀ စာ) နှင့် ဝယ်ယူထားသည့် ဒေတာ သက်တမ်းနှင့် ညီမျှသည့် Shal Kyi service code တစ်ခု ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
Shal Kyi Data Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်သတ်မရှိ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ အသစ်ထပ်မံဝယ်ယူလိုက်သော Shal Kyi Data Pack မှ ဒေတာများနှင့် လက်ကျန်ရှိနေသော Shal Kyi ပတ်ကေ့ချ် ဒေတာ ပမာဏများကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးဝယ်ယူထားသော ပတ်ကေ့ချ်သတ်တမ်းအတွင်း သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၁။ Shal Kyi Data Pack ဆိုတာ ဘာလဲ?
Shal Kyi Data Pack သည် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ၇ရက်စာ Weekly Data Pack နှင့် ၃၀ရက်စာ Monthly Data pack ကို ဝယ်ယူလိုက်ရုံနဲ့ မည်သည့်အခကြေးငွေမှ ထပ်မံပေးဆောင်စရာ မလိုဘဲ Shwe Stream Movie Application ထဲရှိ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားကြီးများ၊ မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းများ၊ မြန်မာစာတန်းထိုး ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများ နှင့် အိန္ဒိယဇာတ်ကားကောင်းများ အပြင် Byoh Lifestyle Application တွင် နေ့စဉ်တင်ပေးနေသော ဗေဒင်၊ ဝိတ်ချနည်းများ၊ အနုပညာသတင်းအစုံအလင်၊ ခရီးသွား၊ အစားအစာ၊ သက်မွေးမှုလုပ်ငန်းများ၊ အောင်မြင်တိုးတက်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အလှအပ၊ ဖက်ရှင်၊ ဗဟုသုတ၊ လိုက်ဖ်စတိုင်၊ နည်းပညာ စသဖြင့် အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကို မိမိတို့စိတ်ကြိုက် ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
၂။ Shal Kyi Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် အမျိုးအစား ဘယ်နှစ်ခု ရှိပါသလဲ? သက်တမ်း ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
Shal Kyi Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် အမျိုးအစား နှစ်မျိုး ရှိပါသည်။
၇ ရက်အတွင်း ဒေတာပမာဏ 225 MB အသုံးပြုနိုင်သော Weekly Data Pack = ၅၄၉ ကျပ် (အခွန် ၁၅% နှုန်းပါဝင်ပြီး) နှင့်
ရက် ၃၀ အတွင်း ဒေတာ ပမာဏ 335 MB အသုံးပြုနိုင်သော Monthly Data Pack = ၉၈၉ ကျပ် (အခွန် ၁၅% နှုန်းပါဝင်ပြီး) ဆိုပြီး အမျိုးအစား နှစ်ခု ရှိသည့်အတွက် မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Package ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
၃။ Shal Kyi Data Pack ကို ဘယ်လိုဝယ်ယူနိုင်ပါသလဲ?
Shal Kyi Data Pack ကို ဝယ်ယူရန်အတွက် အောက်ပါအဆင့်များ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
အဆင့် (၁) – USSD Code နံပါတ် *8208# ကို နှိပ်ပါ။ (သို့မဟုတ်) Weekly Data Pack အတွက် *8208*7# (သို့မဟုတ်) Monthly Data Pack အတွက် *8208*30# ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၂) – ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Package ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးပါက ၀ယ်ယူထားသော ဒေတာ နှင့်တကွ Shwe Stream Application နှင့် Byoh Lifestyle Application တို့ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Link ကို SMS မှတစ်ဆင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၃) ပေးပို့သော SMS ထဲရှိ Link မှတစ်ဆင့် Shwe Stream Movie Application (သို့မဟုတ်) Byoh Lifestyle Application သို့ ဝင်ရောက်ကာ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုနှင့် ဗဟုသုတရဖွယ်ရာ ကဏ္ဍပေါင်းများစွာကို စိတ်ကြိုက် ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၂) ထို့နောက် Shal Kyi Data Pack တွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Package ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးပါက ၀ယ်ယူထားသော ဒေတာ နှင့်တကွ Shwe Stream Application နှင့် Byoh Lifestyle Application ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Link ကို SMS မှတစ်ဆင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ Shal Kyi Data Pack ဝယ်ယူပြီးနောက် Shwe Stream Movie Application နှင့် Byoh Lifestyle Application တို့တွင် ပြသနေသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် အခြားအစီအစဉ်ကောင်းများကို ကြည့်ရှုရန် အခကြေးငွေပေးရဦးမှာလား။
အခကြေးငွေပေးစရာ မလိုပါ။ဒေတာအသုံးပြုမှုများကို ဝယ်ယူထားသော Shal Kyi Data Pack မှ ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာများ ကုန်ဆုံးသွားသောအခါ အခြားဝယ်ယူထားသော Data Pack (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၅။ Shwe Stream နှင့် Byoh Lifestyle Application များထဲရှိ ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုရန် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတာရှိပါသလား?
ကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဗီဒီယိုအရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။
၆။ Shal Kyi Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် အကြိမ်အကန့်အသတ် ရှိပါသလား?
Shal Kyi Data Pack ကို ဝယ်ယူရန် အကြိမ်အကန့်အသတ် မရှိပါ။ စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ Shal Kyi Data Pack တစ်ခုထက် ပို၍ ဝယ်ယူမည် ဆိုပါက ဒေတာပမာဏနှင့် သက်တမ်းသည် ပေါင်းစည်းသွားမှာဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူရရှိထားသော Pack များ၏ စုစုပေါင်း ဒေတာပမာဏကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းကာလကတော့ နောက်ဆုံးဝယ်ယူထားသော Pack ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံး ရက်အတိုင်း သတ်မှတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၇။ Shal Kyi Data Pack Data Quota 225 MB (သို့မဟုတ်) 335MB ကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက် ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုများ ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ဝယ်ယူရရှိထားသော ဒေတာပမာဏ ကုန်ဆုံးသွားပါက လူကြီးမင်း ဝယ်ယူထားသော သက်ဆိုင်ရာ Data Pack (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်မှ ဖြတ်တောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၈။ Shwe Stream Movie Application နှင့် Byoh Lifestyle Application တို့ကို ဘယ်လို Download လုပ် ရပါမလဲ။
Shwe Stream Movie Application နှင့် Byoh Lifestyle Application တို့ကို Google Play Store နဲ့ Apple iTunes Store တို့မှာ ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
၉။ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကို App အပြင်ဘက်ကို Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကို Shwe Stream App ထဲတွင်သာ Download ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အင်တာနက်မလိုဘဲ App ကို အသုံးပြုပြီး ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၀။Shal Kyi Data Pack မှာ ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရှုတဲ့အခါ ဗီဒီယိုတွေရဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအရည်အသွေးကို ရွေးချယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရှုတဲ့အခါ ဗီဒီယိုတွေရဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအရည်အသွေးကို 240P၊ 360P၊ 480P၊ 720P နဲ့ 1080P ဆိုပြီး ကိုယ်နှစ်သက်ရာ အရည်အသွေး (Resolution) နဲ့ ရွေးချယ်ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ ရရှိထားသော Link ဖြင့် Shwe Stream Movie Application (သို့မဟုတ်) Byoh Lifestyle Application ထဲသို့ ဝင်ရောက်၍မရပါ။ ဘယ်လိုပြုလုပ်ရပါမလဲ?
ပထမဦးစွာ Shwe Stream Movie Application နှင့် Byoh Lifestyle Application တို့ကို ဖုန်းထဲတွင် ဒေါင်းလုတ် လုပ်ကာ ထည့်သွင်းထားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ Entertainment Pack ကို ဝယ်ယူပြီးနောက် အောက်ပါအချက်များကို ပြုလုပ်ပါ။
အဆင့် (၁) ပေးပို့ထားသော SMS ထဲရှိ Link ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၂) ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများကို ကြည့်ရှုရန် Open Shwe Stream ကို နှိပ်ပါ။
ဗဟုသုတရဖွယ်ရာ ကဏ္ဍပေါင်းများစွာကို ကြည့်ရှုရန် Open Byoh Lifestyle ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် (၃) Redeem Now ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် (၄) Ok ကို နှိပ်၍ Shwe Stream Movie Application (သို့မဟုတ်) Byoh Lifestyle Application သို့ ဝင်ရောက်ပါ။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ရှင်းလင်းမှု မရှိပါက Customer Support သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဒေတာမရခြင်း (သို့မဟုတ်) Link မရရှိခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက 106 သို့ ခေါ်ဆို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Shwe Stream Movie Application ၊ Byoh Lifestyle Application နှင့် Entertainment Pack ရယူခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက Shwe Stream Facebook Page၊ Byoh Lifestyle Facebook Page နှင့် ဖုန်း ၀၁ ၂၃၀၅၂၇၃ ကို ၂၄ နာရီ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 9, 2020 ဇန်နဝါရီ 21, 2022 Categories Data ဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ
Social Pack Promotion FAQs mm
DATA » Social Pack Promotion
1. Social Pack Promo ဆိုတာ ဘာလဲ?
Social Pack Promo ဆိုတာ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက် ဒေတာအသုံးပြုနိုင်သော Packages များဖြစ်ပါတယ်။ Social Application များဖြစ်သော Facebook, Messenger, Viber, LINE နှင့် Instagram တို့အပါအဝင် Social Data များနှင့် အခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
2. Social Pack Promo မှာအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိပါသလဲ။
Social Pack Promo မှာအမျိုးအစား (၃)မျိုးပါဝင်ပါတယ်။
၁၉၉ ကျပ် 180MB ၂ ရက် *3001# *3333#
၉၄၉ ကျပ် 860MB ၇ ရက် *3002#
၂၆၉၉ ကျပ် 2450MB ၃၀ ရက် *3003#
3. Social Pack Promoဝယ်ယူထားပြီးသုံးစွဲနိုင်သောပမာဏနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော သက်တမ်းကျန်ရှိနေချိန်မှာ နောက်ထပ် Social Pack Promo ကိုထပ်မံဝယ်ယူပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ။
သုံးစွဲနိုင်သော ဒေတာပမာဏနှင့် အသုံးပြုနိုင်သောသက်တမ်းသည် ပေါင်းစည်းသွားမှာ မဟုတ်ပါ။ ဝယ်ယူထား သော Social Pack Promo package တစ်ခုချင်းစီသည် ယင်းတို့၏ သတ်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံး ချိန်တွင် အသီးသီးကုန်ဆုံးပါမည်။
4. Daily Data Pack/Social Pack Promo နဲ့ Data Carry Plus Pack ကို Facebook အသုံးပြုရန် ဝယ်ထားပါတယ်။ ဘယ်က အရင်ဖြတ်တောက်မှာပါလဲ။
Social Pack Promo
Data Carry Plus Pack (Data Carry Plus)
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 8, 2020 စက်တင်ဘာ 9, 2020 Categories Data mm